Le Black Primer Isebenza Njengomlingo Esikhunjeni Sakho - Ubuhle
Le Black Primer Isebenza Njengomlingo Esikhunjeni Sakho
U-Alexa De Paulis
Abantu bebelokhu bethela izengezo kuma-primers selokhu bangene endaweni yobuhle. I-sunscreen, ama-moisturizers, nazo zonke izinhlobo zezinhlayiya ezicwebezelayo kanye nezimbala ezikhazimulayo yizindaba ezindala. Amalahle, noma kunjalo? Lapho ngokomlando into eyodwa enginqabayo ukuyivulela indawo enkambisweni yami (iningi nje alenzi mehluko owanele, i-IMO), iBlackdrop yakwaSmith & Cult, i-primer entsha efakwe amalahle, yangidonsa. Ngashaywa umbala ngedwa; noma imuphi umkhiqizo obeka engcupheni yokukwenza ubukeke njenge-Tiny Tim eminyene ngamalahle kufanele ube nesizathu esivumela umbala, ngicabanga. Bheka futhi bheka, kufakwe indlela enhliziyweni yami.
Nginerekhodi lomkhondo wokuwela kwimikhiqizo engathandeki nokho emnandi. Ngiyakwazi lokho, futhi anginamahloni. Bengilokhu nginje: Bekuwuthando ekuqaleni olungenazimpawu, kusuka Ama-roller ezinwele zaseFrance uku abakhiqizi bezinwele abasebenza ngogesi (inkumbulo yamaphupho amabi ayipheli). Umkhiqizo uthi iBlackdrop ithola umbala wayo ekuxubeni kwefomula yamalahle amalahle nokuthambisa iparele elimnyama, kuyilapho i-vitamin E hydrate ne-phytoplankton zikhipha amawadi ekungcoleni. Lokho kufundeka njengamanye amakhophi wokumaketha amaningi, kepha ukuzimisela kombala kungidonsile. Angizange ngidumale: Idokodo leBlackdrop alibukeki lifana nanoma yimuphi umkhiqizo wobuso engiwuzamile.
Ake ngicacise, noma kunjalo, akubukeki kukhanga ekuqaleni. I-blob iphuma ingabonakali futhi imnyama, futhi ihlala injalo uze uyigcobise — futhi kulapho-ke lapho umuzwa wobumnene be-velvet ushaya isikhumba sakho. Ama-primers okuthambisa asevele ekhona, kepha iningi liletha umphumela oshelelayo wosana ngomthamo omuhle wama-silicone. Abanye abantu abakuthandi lokho, ngoba ama-silicone amaningi anganyathela ngeminye imikhiqizo yakho yobuso (futhi akukho lutho oludelela njengokufaka umkhiqizo wobuso ongenzi nje kuphela umsebenzi wawo kepha ongena endleleni yabanye). Kuze kube sekugcineni, iBlackdrop ayina-silicone. Amasekhondi ayishumi kungene umbala awusekho, kepha ukuthamba kuhlala.
Ngeke ngisho ukuthi isikhumba sami sizizwa siswakeme (lokhu akungeni esikhundleni se- my iya kukhilimu ), kepha umuzwa wokuqina unamathela eminye imizuzwana embalwa, okunginikeza isikhathi sokubamba isisekelo phezu kokubanjwa kwayo okungeziwe. Futhi lapho i-pigment ihlala. Anginaso isikhumba esinamafutha amaningi, ngakho-ke isenzo sokunyamalala kwesisekelo sami singikhungathekise iminyaka. Ekupheleni kosuku, isibazi sami se-jawline acne sihlala sikhulu futhi siziqhenya (futhi impela, lokho kwakusho ukuthi kufanele ngifunde ukuyamukela). Kepha ngosizo lweBlackdrop, angikaze ngibe nohambo lokuzikhulisa; isisekelo sami sihlala sibeka amahora. I-qualm yami eyodwa-kodwa-hhayi-impela yenza ukuthi isisekelo sami sifunde i-powdery kancane uma ngithola amasentimitha amabili kusuka esibukweni bese ngibhekisisa. Kodwa-ke akekho omunye umuntu owenza lokho, futhi ukusuka kunyawo elijwayelekile, umphumela ofanayo ubukeka unebhulashi lomoya, ngaphandle kokuphazamisa #nofilter brand yami yangempela ye-Instagram.
Enye inzuzo ebonakalayo? Ngaphandle kweseluleko salo lonke udokotela wesikhumba engake ngahlangana naye, ngingumuntu othinta ubuso obungapheli (kungahle kube nokuxhumana okuthile nesenzo sami sokunyamalala kwesisekelo, kepha izifundo azihambelani). Ngalo goo omnyama omangalisayo, akukho okuhambayo — noma ngishaya ucingo, noma ngicindezela ithubhu emnyama ecwebezelayo ebusweni bami ukuyivivinya njengesitayela esingelona iqiniso. Angicabangi ukuncoma okuphakeme.
ISmith & Cult iBlackdrop Charcoal Brightening Primer , $ 32, ulta.com
- Abesifazane aba-5 Bazama oLwesihlanu oLwezihlanu Isikhathi Sesikhathi Sobuso
- Abahleli Bokugcoba Abahle Kakhulu Abake Bazama
- Ngizamile I-Viral Black 'Anti Highlighter kaRituel de Fille's Black', futhi Kubukeka Kumangalisa Ngezindlela Eziningi
ungathatha i-nyquil njalo ebusuku
Kune-Ballet Flat entsha kwa-J.Crew (futhi I-Office ngokuphelele-Inobungane)
I-Peat Moss Engadini - I-Sphagnum Peat Moss isebenzisa
Umqondo Omnandi Wesipho Sokugeza
Izinto Ezi-6 Ofanele Uzazi Ngezilingo Zezinwele Zomshado (Futhi, Bona Imifanekiso Esivela Esivivinyweni Somngane Wami Omkhulu - Uzofuna Ukuntshontsha!
izinduku ezingenazintambo zamabhasi amakhulu
ngiyathanda ukugqoka umyeni wami njengomuntu wesifazane
izingubo ezibabazekayo zosayizi 16
imibono emihle yekamelo lokulala